Uyijikelezisa njani ividiyo kwi-iPhone | IPhone iindaba
Uyijikeleza njani ividiyo kwi-iPhone
Izixhobo zeSmart mobile, ezaziwa ngcono ngokuba zii-smartphones, zibe zezona zixhobo zisetyenziswa kakhulu ngabo bonke abasebenzisi kuzo gcina elona xesha libalulekileyo, sishiya ngokupheleleyo iikhamera ezihlangeneyo ecaleni, nangona ezi zilandelayo zisinika amanqanaba aphezulu kakhulu e-flash, zilungele xa sifuna ukuthatha iifoto ngokukhanya okuphantsi.
Ukukhawuleza kuhlala kungabacebisi abangalunganga kwaye ngokuqinisekileyo ngamanye amaxesha kuye kwafuneka uyisuse ngokukhawuleza i-iPhone epokothweni yakho kwaye uqalise ukurekhoda umcimbi ngaphandle kokuqonda ukuba ukuqhelaniswa kwawo bekungachanekanga ngokupheleleyo, kwaye umfanekiso uphume kakuhle ngenye indlela okanye icala. Kule meko, ukuba ufuna ukwazi indlela yokujikeleza ividiyo Sinokusebenzisa usetyenziso esikubonisa lona apha ngezantsi.
Kodwa ayisiyiyo kuphela sizathu sokuba sifune ukujikeleza ividiyo, kodwa isenokuba kukufumana ividiyo erekhodiweyo engakhangeleki kakuhle kwindawo esishicilele kuyo, isinyanzela ukuba siyijikeleze ukuba sifuna ukuba iziphumo zevidiyo zigqibelele. KwiVenkile yeApple sinokufumana inani elikhulu lezicelo ezisivumela ukuba senze oku, sihlala sigcina isisombululo esifanayo kwaye ngaphandle kokutshintsha umgangatho wevidiyo. Apha sikubonisa ifayile ye- Ezona zicelo zilungileyo zokujikeleza iividiyo kwi-iPhone yethu.
1 iMovie ukujikeleza ividiyo
2 Ukujikeleza ividiyo kunye neFlip-Akukho xesha libekiweyo
3 Jikelezisa ividiyo kunye neFlip
4 Jikelezisa & Flip Ividiyo
5 Ividiyo Jikelezisa
6 Ividiyo yesiKwere
7 Ividiyo ye-HD Jikelezisa kwaye uFlip
8 Iingcebiso ezisisiseko xa urekhoda iividiyo
iMovie ukujikeleza ividiyo
Siza kuqala olu luhlu ngesicelo sasimahla esenziwa ngu-Apple ukuba singaneli nje ukwenza iividiyo ezintle, kodwa ikwasivumela ukuba sibahlele ukuze sibasike, sibajikeleze ... ukhetho olusinika lona ngexesha lokujikeleza iividiyo. Umsebenzi ilula kangangokuba kubonakala ngathi olu khetho alukho kuba kufuneka songeze ividiyo ekuthethwa ngayo kwaye ngeminwe emibini siyijikeleze kulungelelwaniso esilufunayo. Nje ukuba le nkqubo yenziwe, kuya kufuneka ucofe iqhosha elenziweyo ukugcina ulungelelwaniso olutsha kunye nokuthumela ividiyo kwi-reel yethu kwisisombululo esifanayo apho ibibhalwe khona, kungenjalo sifuna ukuphulukana nomgangatho apha endleleni.
Ukujikeleza ividiyo kunye neFlip-Akukho xesha libekiweyo
Ingxaki esijamelana nayo kolu hlobo lwesicelo kukuba kunzima kakhulu ukudideka kuba uninzi lunamagama afanayo, anje ngesi sicelo kunye nesilandelayo. Ividiyo ejikelezayo kunye neFlip (akukho mida yexesha), ndikhetha ukuqhubeka ndisebenzisa igama lesiNgesi kuba uguqulo lishiya lukhululekile, lusivumela ukuba sitshintshe ukubonwa kweevidiyo zethu simahla kwaye ngaphandle kolunye uphawu. Ngokucacileyo, umphuhlisi akayenzanga i-NGO, ke ngoku kutshintshiselana Kuya kufuneka sibandezeleke inani elikhulu leentengiso, Iintengiso esinokuthi sisuse ngokuhlawula i-euro ezingama-3,49. Ifuna i-iOS 8.0 okanye kamva kwaye iyahambelana ne-iPhone, i-iPad, kunye ne-iPod touch.
Jikelezisa ividiyo kunye neFlip
Esi sicelo, kunye neMovie, zizicelo endihlala ndizisebenzisa ukujikeleza iividiyo xa ndisifumene isidingo sokwenza njalo. Ukujikeleza ividiyo kunye neFlip kuyasivumela Jikelezisa ividiyo nakweyiphi na indawo yokuziqhelanisa esiyinikela kwimowudi yesipili ukuze uyijikeleze ngokuthe tyaba ividiyo, Into ekunqabileyo ukuba zisinikeze kwiVenkile yeApp.
Esi sicelo siyahambelana zombini i-iPhone kunye ne-iPad kunye ne-iPod touch. Ukujikeleza kweVidiyo kunye neFlip kunexabiso eliqhelekileyo kwiVenkile yeVenkile ye-2,29 euro kunye nenye yeefayile ze- Ezonaapps zilungileyo zifumaneka kwivenkile yeapile. Ngaphandle kwamathandabuzo i-100% iyacetyiswa kolu hlobo lwemeko. Ukujikeleza kweVidiyo kunye neFlip kufuna i-iOS 8.0 okanye kamva kwaye iyahambelana ne-iPhone, i-iPad, kunye ne-iPod touch.
Ividiyo Jikelezisa & Flip-HD€ 2,29
Jikelezisa & Flip Ividiyo
Jikelezisa & Flip Ividiyo ibonakaliswa ngokuba Isicelo sasimahla esivumela ukuba sitshintshe imeko yeevidiyo ukusuka nkqo ukuya ethe tyaba okanye ngokuchaseneyo ngokukhawuleza nangokulula, ngaphandle kwazo naziphi na iindlela zoqwalaselo. Jikelezisa & Flip Ividiyo ifuna i-iOS 9.1 okanye kamva isebenze kwaye iyahambelana ne-iPhone, i-iPad, kunye ne-iPod touch.
Ividiyo Jikelezisa ivumela ukuba sijikeleze ividiyo ngokwewotshi okanye ngokuchasene newotshi, esivumela ukuba sijikeleze iividiyo nge-90, 180 okanye i-270 degrees ngesinxibelelanisi somsebenzisi esilula esingadingi lwazi lubanzi. Nje ukuba sijikeleze ividiyo singathumela ngaphandle iziphumo ezifunyenwe kwisisombululo sazo santlandlolo kwi-reel yethu ukuze sikwazi ukwabelana ngayo okanye ukuyihlela nezinye iinkqubo. Ukujikeleza kwevidiyo kuyafumaneka simahla, Ifuna iOs 9.0 okanye kamva kwaye iyahambelana ne-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod touch.
Ukujikeleza kweVidiyo-uMhleli weVidiyoMahala
Isikwere seVidiyo sisicelo esifumanekayo sokukhuphela simahla kwiVenkile ye App kodwa ngeentengiso, iintengiso esinokuthi sisuse ngokuhlawula i-euro ezingama-3,49. Esi sicelo asisivumeli nje kuphela ukuba sijikeleze, sandise okanye silime iividiyo kodwa ngokuzenzekelayo ikhathalela ukuziqhelanisa ne-Instagam ukunqanda loo nto ngexesha lenkqubo yokulayisha, inkonzo iyasika apho ingafanelekanga. Iimfuno zeVidiyo zeSikwere ze-iOS 7.0 okanye kamva kwaye iyahambelana ne-iPhone, i-iPad, kunye ne-iPod touch.
Isikwere seVidiyo-Isityalo, Jikelezisa, Sondeza, Hlaziya ubungakanani kwakhona kwaye wenze iiVidiyo zakho ze-InstagramMahala
Ividiyo ye-HD Jikelezisa kwaye uFlip
Ividiyo ye-HD ejikelezayo kunye neFlip isinika kuphela kwaye ngokukodwa ukubanakho Jikelezisa ngokuzenzekelayo ividiyo ngendlela efanelekileyo esiyifunayo. Nje ukuba uguquko lwenziwe, singathumela kwelinye ilizwe ngokuthe ngqo kwisisombululo sayo sangempela kwi-reel yesixhobo sethu. Esi sicelo Inexabiso le-2,99 euro kwaye ifuna i-iOS 9.0 okanye kamva ukuba isebenze ngokufanelekileyo. Ukongeza, iyahambelana ne-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod touch.
Iingcebiso ezisisiseko xa urekhoda iividiyo
Ngoku kuthweni Uyayazi indlela yokujikeleza ividiyo kwi-iPhoneSiza kukunika iingcebiso ezisisiseko zokufumana uninzi lwekhamera yakho ephathekayo.
Uninzi lwabasebenzisi banemania ye rekhoda ividiyo kwimowudi yemizobo, kuba ngale ndlela banokubamba umxholo omninzi ngaphandle kokusuka kwindawo abakuyo, kodwa xa kufikwa ekuyiboniseni kwiscreen sekhompyuter okanye kumabonwakude sibona indlela esiphulukene ngayo nomxholo owongezelelekileyo owawukuloo ndawo ukuba besiya kuyirekhoda ngokuthe tyaba. Kusoloko kucetyiswa ukuba usuke kwindawo encinci ukuze ubambe ulwazi ngakumbi.
Ukuba sihlala sikhona vimba ukujikeleza kwescreen se-iPhone yethu Kwaye ukuba siyazi ukuba kuya kufuneka sisebenzise ikhamera, kungcono sikhuphe olu khetho ukuthintela ukuba zonke iividiyo esizirekhodayo zirekhodwe ngokuthe tye.
Sukusebenzisa ukusondeza kwidijithali. Ukusondeza kwedijithali akusebenzisi iilensi ukusondela kwinto leyo, kodwa into eyenzayo kukwandisa ngokwamanani umfanekiso esiwubonayo kunye nesiphumo sokulahleka komgangatho. Ukuba ufuna ukurekhoda into ngokusondeleyo, sondela njengoko urekhoda, lolona sondiso lubalaseleyo esinokulufumana ngoku kwii-smartphones.
Ungaze urekhode ujonge ilanga okanye ukukhanya ngokuthe ngqo, kuba ekuphela kwento esiza kuyiphumeza kukurekhoda ii-silhouettes ngaphandle kokufaka naziphi na iinkcukacha zabantu okanye izinto ezibonakala kwividiyo. Iikhamera zobungcali zevidiyo zenzelwe ezi ntlobo zeemeko kodwa hayi ezo ze-smartphones, nokuba ingaba i-iPhone 7 Plus inokuba njani.
Siyathemba ukuba emva kweziphakamiso neengcebiso zethu awusayi kuba namathandabuzo malunga indlela yokujikeleza ividiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Uyijikeleza njani ividiyo kwi-iPhone
Ukuba usebenzisa i-WhatsApp ukuthumela ividiyo ikunika ithuba lokuyijikeleza.
I-Spotify isungula uluhlu lwadlalwayo lweqela ngoMyalezo
Iifoto ezininzi kunye nevidiyo ekucingelwa ukuba yi-iPhone 8 ibetha umnatha